SAWIRO:- Banaanbax looga soo horjeedo Madaxweynaha Jubbaland oo ka dhacay Gedo+ Sawirro - Awdinle Online
SAWIRO:- Banaanbax looga soo horjeedo Madaxweynaha Jubbaland oo ka dhacay Gedo+ Sawirro
Banaanbaxyadaan oo ay soo abaabuleen Mas’uuliyiinta Sar sare ee Maamulka Gobolka Gedo ayaa waxaa ay maanta ka dhaceen degmooyin iyo degaano ka tirsan Gobolka Gedo ee dowlad Goboleedka Jubbaland.
Banaanbaxyada oo looga soo horjeeday in gobolka Gedo mamulidiia lagu wareejiyay Madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa ay ka kala dhacen degmooyinka, Garbahaareey, Dooloow, iyo degmooyin kale oo ka tirsan Gobolka Gedo.
Dadka bananbaxa dhigayay oo u badan Haween & dhalinyaro ayaa waxaa ay sheegeen in marnaba aysan ogolan doonin in gbolka Gedo lagu wareejiyo Maamulka Jubbaland ee uu hoggamiyo Madaxweyne Axmed Madoobe.
Waxaa ay sheegeen banaanbaxayaasha in sidoo kale Maamulka Jubbaland uusan ka Shaqeyn doonin gobolka Gedo, waxaana ay Madaxweynaha Jubbaland ku eedeeyeen in uusan waligiis waxba u qaban Bulshada gobolka Gedo.
Ugu dabeyn banaanbaxayaasha ayaa ugu baaqay Madaxda Sare ee dowladda Soomaaliya in marna aysan wax heshiis ah oo ku saabsan gobolka Gedo aysan la gelin Maamulka Jubbaland.
Banaanbaxaan looga soo horjeeday Madaxweynaha Jubbaland ee Maanta ka dhacay degmooyin ka tirsan Gobolka Gedo ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli uu fashilmay shirkii Madaxda dowladda & dowlad Goboleedyada oo intiisa badan looga hadlay maamulida Gobolka Gedo.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo dib ugu soo laabtay Muqdisho
Next articleXildhibaannada Aqalka Sare oo laga saaray Kulanka Baarlamaanka & mursal oo ka hadlay